Soo dejisan MP3Test 1.7 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: MP3Test
MP3Test – waa software si loo eego faylasha MP3 qaladka. Software wuxuu si toos ah ugu wareejinayaa dhamaan feyladaha muusikada oo la jajabiyay liiska ku habboon iyo wuxuu muujiyaa boqolkiiba qaladka saxda ah, tayada, qiyaasta iyo wadada faylka. MP3Test wuxuu muujinayaa taariikhda sheekooyinka gabay kasta oo boqolkiiba waxyeelada iyo qaladaadka lagu muujiyo midabyo kala duwan. Software wuxuu u qaybiyaa heesaha liiska faylasha waxyeelada leh iyo khaladaadka aan khaladaadka lahayn ee lagu xallin karo magaca, mudada ama boqolkiiba khaladaadka. MP3Test wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhageysatid heesaha cayaaraha ee default, u dhaqdhaqaaqa ama tirtirto faylka muusikada, nuqul dhammaan liistada shaxanka iyo fiiri faahfaahinta faahfaahsan ee ku saabsan faylka kasta ee shakhsiyeed. Software waxay taageertaa dib u habeynta feylalka ee habka isdabajooga iyadoo la tixgelinayo xisaabteeda iyo sumadaha. MP3Test sidoo kale waxaa ku jira qalab lagu habeeyo software si loogu isticmaalo baahida loo qabo.
Raadi heesaha dhaawacmay
Waxay muujisaa khaladaadka qaabka histogramka
Qaybinta faylalka ee faylasha
Kala soocida iyo maareynta faylasha muusikada
Soo dejisan MP3Test
Faallo ku saabsan MP3Test
MP3Test Xirfadaha la xiriira